စောင့်, Trip — Didn't You Retire? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
စောင့်, ခရီးစဉ် - သင်အနားယူမဟုတ်?
တစ်စုံတွဲ months ago ငါသည်တအမှတ်တံဆိပ်အသစ်အယ်လ်ဘမ်ကြေညာခြင်းဖြင့်လူတိုင်းအံ့အားသင့်, “တက်.” သငျသညျငါ့တံဆိပ်ရှေ့တော်၌အကြောင်းကိုတိတ်ဆိတ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ငါအများပြည်သူသွားလေ၏ဘယ်လောက်ခက်ခဲနားမလည်ကြဘူး. အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ကိုကျော်တစျနှစျအတှကျအကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့, ငါကလူတိုင်းကိုပြောပြရန်မစောင့်နိုင် - ငါအသစ်တစ်ခုခုကိုကျဆင်းနေသောအခါတောင်းစောင့်အထူးသဖြင့်သူတို့အား.
အဆိုပါတုန့်ပြန်ယခုအထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအားတက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်. ငါကလူကိုငါနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်တော်တော်လေးတိတ်ဆိတ်ဖူးသော်လည်းငါ့ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ဆက်လက်ပြီအံ့သြမိပါတယ်. သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသာတိုးမြှင့်သတ္တုတွင်းရှိပါတယ်.
ငါသဖြင့်မအံ့သြခဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှာဒီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်: "စောင့်ပါ, ငါသည်သင်တို့ကိုအငြိမ်းစားထင်?"ဒီအရိပ်ကဲ့သို့ငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်မှာအောက်ပါအတိုင်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်. ငါကဖြေရှင်းပါတယ် အင်တာဗျူးများ, tweets, နှင့် ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ, ဒါပေမယ့်ငါကဆဲအချို့မှမသိရသေးင်သိ. ငါ့ကိုစံချိန်ဖြောင့်တင်ထားရန်ကြိုးစားရန်ဆက်လက်စို့: ငါအငြိမ်းစားဘယ်တော့မှ.
တွင် 2012, ငါ "ကိုပယ်ဂီတကနေနင်း။ " ဖြစ်င့်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့, ငါအငြိမ်းစား-ish အသံသိ, ငါမူကားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြောင်းစကားလုံးကိုမသုံးခဲ့ပါ. ငါမကြောင့်ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရေကြောင့်ထားရှိမည် 100% ကတူမယ်လို့အဘယျအသေချာပါ.
ငါက "ကောင်းမွန်သောဘဝက" ငါ့နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်မှန်းသိ, ဒါပေမယ့်ငါသေချာမသိခဲ့. ဒီနေရာမှာငါသိခဲ့ပါရဲ့: ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငါဂီတနှင့်ဆက်စပ်သောဘယ်လိုပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့ကြီးမားတဲ့ဦးစားပေးပြောင်းကုန်ပြီရှိလိမ့်မယ်လို့. ငါအများကြီးသကဲ့သို့ငါ၏သူချင်း emcees နှင့်အတူထွက်လမ်းကိုအပေါ်မဖြစ်လိမ့်မယ်. ငါအသစ်ဂီတ၏တစည်းထွက် crank နိုင်မည်မှာမဟုတ်ဘူး. ငါအချိန်ပြည့်ရက်ပ်မဖြစ်လိမ့်မယ်. ငါသင်းအုပ်ဆရာဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုကူညီပေးလိုကိုသိ.
ထိုကာလကတည်းက, ငါဝါရှင်တန်၌ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာအမှုဆောင်ဖြစ်ဖူးတဲ့ D.C. အမျိုးမျိုးသောကြေးအခန်းကဏ္ဍအတွက်. ငါ admin ရဲ့အလုပ်အမှုကိုပြုပါတယ်, ဟောပွောခွငျးနှငျ့ဆုံးမဩဝါဒ, လူငယ်ဝန်ကြီးဌာန, အိမ်ထောင်ရေးအကြံပေးခြင်း, စသည်တို့ကို. ငါမဆိုပြသလုပ်နေတာသို့မဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတာဝန်ဝတ္တရား၏သီချင်းတစ်ပုဒ်၏တစ်ခုတည်း bar ကိုရေးသားခြင်းမရှိဘဲလအတွင်းသွားလေ၏. ငါကိုတောင်ထွက်ထိုင်လျက် 2013 Unashamed ခရီးစဉ်. ထိုအခါသော်လည်းငါအသစ်ဂီတဖန်တီးခြင်းလွဲချော်, ငါလုပ်နေတာခဲ့ကြရတယ်အဘယျအခစျြ. ကနျြးမာရေးကိစ္စရပ်များကိုကြိမ်မှာစိန်ခေါ်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဒါပေမဲ့ငါ့မိသားစုနှင့်ငါ့အဘို့ကြိုးရာသီဖြစ်ရဲ့.
အချိန်ပြည့်ကြေးဓမ်မအမှုကြောင့်ပထမနှစ်တွင်ပြီးနောက်, ငါဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်တမ်းအသစ်တစ်ခုပေါ်အလုပ်လုပ်စတင်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်. အကြှနျုပျ၏ဖန်တီးမှုဖျော်ရည်ကိုတက်ယူဂိုဆလားဗီးယားခဲ့, ငါသွားဖို့အဆင်သင့်ခဲ့. ဒါပေမယ့်အစားငါးခြောက်လ non-stop အရေးအသား၏ burst နဲ့မှတ်တမ်းတင်၏, ဒီအယ်လ်ဘမ်ဂီတ, ငါ့အချိန်ပြည့်အလုပ်မဟုတ်ခဲ့ကတည်းကနှေးနှေးနှင့်မှန်မှန်ခဲ့သည်. ငါဖြည်းဖြည်းချင်းသီချင်းတိုင်းကျွမ်းကျင်စွာနိုင်သောကြောင့်, ဒါကအကြီးအထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့, နှင့်တတ်နိုင်သမျှစုံလင်ခြင်းကြောင့်အဖြစ်အနီးကပ်ရ.
ငါတဦးတည်းထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ဒီအချိန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, အစားမတူညီတဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့စည်းကနေခြေရာခံတင်ပြချက်များကိုလက်ခံ၏. ငါ Gawvi ဖို့စိတ်ကူးကိုဆောင်ခဲ့ရတဲ့အခါသူကခစျြတဲ့, ကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တစ်ခုခုလုပ်အချင်းချင်းတွန်း. ဒါကြောင့်မိသားစုနှင့်အသင်းတော်ကိုတာဝန်များမှပယ်ရှားရဒါခက်သောကြောင့်ငါအတ္တလန်တာမှလုပ်တိုင်းခရီးစဉ်အရေးပါခဲ့သည်. ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်တစ်နှစ်လျှင်ကျော်, ထိုသို့နီးပါးထွက်မယ့်!
ငါလူတချို့အနာဂတျမှာနေတုန်းပဲငါ့ထံမ​​ှမျှော်လင့်သောအရာကို ပတ်သက်. ရှုပ်ထွေးနေဆဲသိ. ငါ့အဘို့များစွာသောမသိရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူးသင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြလိမ့်မယ်:
– ငါဆဲ rap နှင့်စကားပြောဆိုရန်သွားလာချင်.
လိမ့်မည် “တက်” အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်? ဒါဟာဖြစ်နိုင်, ဒါပေမယ့်ငါမမျှော်လင့်ပါတယ်. အခုအတွက်တော့, ငါယခုအချိန်တွင်မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ငါထင်သောအရာကိုသင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူမျှဝေချင်သေး, ငါ၏အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်. တစ်တွေအများကြီးကတည်းကပြောင်းလဲသွားပြီ 2012, မဟုတ်တဦးတည်းအရာတူညီနေဆဲ: ယရှေုသညျမိနျ့တျောမူ၏, ငါသည်ငါ၏ဂီတနှင့်အတူသူ့ကိုဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်.
မိုက်ကယ် • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 4:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I’m so happy to hear Trip Lee’s new music. Can’t wait for the new album. Trulyatalented guy
တိုနီ • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 8:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Good Day my good brother? Its an awesome thing that your passion and desire for music is still flowing through your veins as well as your desire to spread God’s word through sermons. I can imagine how time consuming things are with family, ဂီတ, ministerial duties etc. Born from D.C and raised in Ft. Worth, itsagreat thing to seeabrother from my neck of the woods doing God’s work in every area.
Thanks for the music brother.
Francis • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Thank you for the continuous transparency!
MrAveryBrown • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Trip has always been intentionally consistent in his approach to teaching, preaching, and music, which has encouraged me and continues to encourage me, daily. When the initial announcement was made in 2012, I knew it wasn’t an official “retirement”, justastrategic shift to focus on other things. Even now, he’s delicately balancing preaching, ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်း, ဂီတ, and family in an awesome way. That’s why I’ll continue to support him in his endeavors, and as he mentioned “ယရှေုသညျမိနျ့တျောမူ၏, and I want to honor Him…” ငါဆိုသည်ကား, keep going Trip, your life, music and ministry speaks volumes, beyondastage,amic, orasound bite, your life and the way you intentionally carry yourself, speaks volumes.
DavidQuinones • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Trip lee…your life and passion for Jesus amazes me!! You really bless my heart. i am someone who loves authentic people and though i do not haveaclose relationship to you, that authenticity comes out through your music and your messages. i met you in Philadelphia at Carin University two years ago and it wasalife-changing experience… my dream is to one day work with you in ministry and in music…. keep the faith my friend!!!
Kevin Halloran • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Great to hear, ခရီးစဉ်ကို! Keep preaching and rapping the Word. Excited to see what the Lord has in store.
MattShafer • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I’m glad you’re back making music but, more than that, I’m glad that you’re following the way the Lord wants you to go. Your music, books, and messages have beenagreat uplift to me over the past couple of years. Thank you so much for those. You’re in my prayers.
Michael Jimenez • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Trip you’re an inspiration to all of us Christian Rappers. We support every and any decisions you make. Keep it
John Widner • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Trip Lee is the best keep up the good work man
Logan • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 11:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
VICTORKHIZ • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 11:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
YES! THANK YOU FOR THIS BLOG POST TRIP! IT’S ENCOURAGING TO SEE THAT YOU ARE STILL OPEN TO MAKING MUSIC BUT AT THE SAME TIME ARE STAYING FAITHFUL TO THE MINISTRY IN THE CHURCH. YOU ARE ONE TALENTED DUDE. I LOOK FORWARD TO HEARING YOU LIVE ONCE AGAIN. PRAYING FOR YOU.
ဖြစ်လိမ့်မယ် • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 11:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, I am do glad you decided to allow God to use you in music once again. I love his work, and I am happy that soon I will have more relevant tunes to praise God to. ခရီးစဉ်ကို, you have been such an encouragement, not only to the young, but to the young at heart, and those across the world. I hope my son turns out to beaman after God’s own heart, such as yourself, and that he will allow God to use him in everyway possible. It is important that our young men haveaGodly example before them. Keep doing the will of God. I believe that by staying obedient, God will show himself and bring healing to you. မင်္ဂလာ Be!
အင်ဒရူး • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 11:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I love how Trip Lee is doing what the Lord has called him to do. He is following the Lord and honoring him with his music. Keep doing what the Lord has called you to do.
Caleb Gordon • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 1:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I can’t wait to see you at WinterJam!
Robert May • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 1:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I am very excited to see that you are disciplined enough to slowly do music and be fully committed to your family and God’s Church. Can’t wait to hear your album though.
Kudz • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 2:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Woow this is awesome Trip.I cannot wait for Rise to come out soon.I definetly think this album is going to touchalot of people.Your music inspires me.Continue to honour the Lord as you do.
Blessings all the way from New Zealand!
RommelAlonzo • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 3:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I really look up to you bro! As someone who isaPhD student in engineering,ayouth pastor andaworship leader amongst other things, you’re struggle to findaway to use the talents God has given you has inspired me not to give up in finding the Good life. As soon as I heard the title of your new album, I knew this was God’s way of tellin me it’s time to wake up and to not give up on finding the Good life in him. Even if I fail, your music reminds me that he won’t. Thanks for your music and for the struggle you put yourself through to simply get the message out.
စာရာသည် • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 3:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Much respect for you, ခရီးစဉ် Lee က. You’reaman of God. You’ve always been one of my favourite rappers and I couldn’t be happier that you’re releasing new music whilst fulfilling your duties to your family and church.
I have so much gratitude to God for that fact that artists like you exist. မင်း, through God, have provided me so much inspiration in the midst of both my struggles and triumphs, and for that I’d like to show my sincere appreciation. It’s one of my dreams to see you in concert, either by you visiting New Zealand or by me travelling to the US for one of your shows! God bless and much love to you and your beautiful family.
အက်ရှလေ • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 5:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အံ့သြဖွယ်ခရီးစဉ်! Keep going where He leads you…and please share all of your amazing experiences with us as you go!
Brandon • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 5:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I am always stirred up and encouraged by Trip’s artistry. I praise God for that brother. I hope he moves to Atlanta so we can build.
နစ်ခ် • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ErickCorral • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 10:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I can’t wait for this new album. I Started listening to Christian hip hop in 2013. First artist I heard was Lecrae. I was hooked since I first heard Church Clothes. Time went by and I started to find out about Andy Mineo, KB, ခရီးစဉ် Lee က, Tedashii and so on. All of these guys’ music has changed my life. Totally changed my taste in music and also encouraged me to get more involved with my faith. Thank you Trip and the rest of 116. I hope I get to see you in concert soon. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
CB • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 11:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, as you were out of music, I noticed an extreme difference in your approach to your faith & career from other 116 artists. I have been able to see & feel through your journey that being pliable in the hands of the Father has been your number one priority (not saying that isn’t true for the other artists). I admire you for the way that you’ve gone about your pursuit of your goals. I’m proud to beafan of yours & SO EXCITED that there’s new music from you. I am praying Isaiah 60:1-2 over you & သင့်မိသားစု, as I feel that RISING to the glory of God that’s shining into your life, is what you’ve been doing over the last years. Salute!
JoshuaDenim • အောက်တိုဘာလ 9, 2014 တွင် 12:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I’m happy for you bro. I know you’ll do whatever God is asking of you. But for you to say this is your best work yet..I’m really excited to hear what God has been laying on your heart through the music. God bless you man and thanks for teaching me all the things you have through you music.
PS – 20/20 was BOSS!! ဟားဟား
AustinRoberts • အောက်တိုဘာလ 9, 2014 တွင် 12:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, I’m happy to know you have createdanew album. I’m more happy as to the fact you stepped side from music forawhile to focus on things in your personal life, that you felt were far more important in which the were. For years I have looked up to you as well asafew of your fellow emcees because if I hadn’t began listening to, what most would call mere lyrics, I would much rather call your words, or songs rather, lyrical testimonies and preachings. Before hearing your music, I was inadark place. I had fallen far from the arms of God. Your music, as well as other artists, brought me closer to God and motivated me to better myself. I thank you as well as other emcees in your category for inspiring me and motivating me to come closer to God. I support you and what you do because you don’t do the things you do for yourself. အဘယ်သူမျှမ. You do them in the name of the Lord and I respect that so much. Keep on doing the things you do. God isn’t done working with you yet. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
LIllian • အောက်တိုဘာလ 9, 2014 တွင် 8:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Took the words right out of my mouth. I’m proud of you, ခရီးစဉ်ကို, and excited for everything you’re doin. :) ဆက်လက်ပြီးရှိသည်!
GabeTaviano • အောက်တိုဘာလ 9, 2014 တွင် 11:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Some just didn’t catch your words of prophecy, that you weren’t just referring to God being on his Brett Favre.
DrowningInGrace • အောက်တိုဘာလ 11, 2014 တွင် 11:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I praise God for your diligence and dedication to His word. The time spent on your album is evident in the tracks that have been released so far. I love your work and ministry and look forward to what God has in store for the Body of Christ through you.
ဂျူလီယာပွတ် • အောက်တိုဘာလ 14, 2014 တွင် 9:34 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
I recently (4 days ago) just saw you in concert in Salt Lake City, UT. I absolutely loved the way you were so transparent in your songs. You preached the gospel so clearly, thank you. Thanks so much for bringing hope to the world in the name of Jesus. နင့်ကိုချစ်တယ်!
ဂျူလီယာပွတ် • အောက်တိုဘာလ 14, 2014 တွင် 9:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
tamsyn • အောက်တိုဘာလ 19, 2014 တွင် 3:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Hi Trip Lee. I love your song sweet victory. I love the authenticity of your lyrics. Its really helped me feel like there are people who can sincerely relate with my struggles asaChristian. Cause its not easy. Witnessing how Gods used you due to obedience, ie remaining faithful despite the pain- both encourages and challenges me not to tap out, but to keep pressing on.Christ is soo proud of U. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ! Tamsyn, တောင်အာဖရိက
JesiliaLeaupepe • အောက်တိုဘာလ 21, 2014 တွင် 9:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
My husband and I are excited for this new album and have listened to every song that has been released so far from Rise. You got great stuff on it bro. We’re glad to be supporting you by buying your new album. (စကားမစပ်, you’reaHUGE inspiration to my husband. He’sabig fan of yours-from rapping, to buying your book, and to admiring your love for your wife and kids and how you display it all the time in interviews).
ဘုရားသခငျသညျသငျသညျ bro ကောင်းကြီးပေးတော်မူ. May God continue to grant you the strength you need to deal with all your responsibilities. Supporting you all the way from the Bay in California.
Liz • အောက်တိုဘာလ 23, 2014 တွင် 12:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
You have been suchablessing to me and many others. God has been clearly shown even through your weakness.
ဖေါ်ပြ: ယရှေုခရအင်ပါယာ | Christian Rapper Trip Lee Tells Fans ‘I Never Retired’ From the Hip Hop Game
ဖေါ်ပြ: Trip Lee Says He Never Retired from Music | BCNN1 WP
Billy • နိုဝင်ဘာလ 12, 2014 တွင် 11:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Bro I just downloaded your album and maaaannnn certain songs almost brought tears to my eyes. Thank you for reppin the Lord man you all have beenahuge blessing in my life and brought me closer to Jesus with your music. #116
ယောဟနျသ • နိုဝင်ဘာလ 21, 2014 တွင် 6:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, I love the new album. Listening this morning before going into work. So encouraging!
အဘိဂဲလ • သြဂုတ်လ 10, 2016 တွင် 4:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I LOVE YOUR MUSIC TRIP!!!!! I love how you represent the gospel through your music. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!!!